BKF ပြုပြင်ရေးကိရိယာ BKF Recovery ကို software ကို။
DataNumen BKF Repair အဆိုပါဖြစ်ပါသည် အကောင်းဆုံး BKF ကမ္ဘာပေါ်မှာပြန်လည်ထူထောင်ရေး tool ကို။ ဒါဟာအကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပြုပြင်နိုင်ပါတယ် BKF ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းပြီးသင်၏အချက်အလက်များကိုတတ်နိုင်သမျှပြန်လည်ရယူပါ။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen BKF Repair?
ပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းသည်မီတာဖြစ်သည်ost တစ် ဦး ၏အရေးကြီးသောစံ BKF ပြန်လည်ထူထောင်ရေးထုတ်ကုန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောစစ်ဆေးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ DataNumen BKF Repair အကောင်းဆုံးပြန်လည်နာလန်ထူမှုနှုန်းရှိပါတယ်, Recovery for Backup နှင့်အတူတူပင်, စျေးကွက်ရှိအခြားပြိုင်ဘက်ထက်သာ။ ကောင်း၏! ၏စျေးနှုန်းအဖြစ် DataNumen BKF Repair ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန် Recovery for Backup ထက်အများကြီးပိုစျေးပေါသည် DataNumen BKF Repair အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း / စွမ်းဆောင်ရည်အချိုးအစားရှိပါတယ်။
ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာပါ DataNumen BKF Repair ယှဉ်ပြိုင်ဆေးလိပ်သောက်
Windows XP backup ဖိုင်ကိုပြန်ယူရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ဆော့ဖ်ဝဲသည်အံ့ဖွယ်ရာများဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။
နယူး Brunswick, NJ, USA
မင်းပြောတာအတိုင်းငါလုပ်ခဲ့ပြီးပြီ၊ ၁၀ နှစ်ကြာအလုပ်ပြန်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Nevernind - အခုရပြီ၊ လင့်ကအီးမေးလ်ကနေလည်းလာတယ်။
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen BKF Repair v2.9
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု BKF Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP နှင့် Server 2003 backup utilities များဖြင့်ဖန်တီးထားသောဖိုင်များ။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု BKF Windows NT, Windows Server, Netware, OS /2သို့မဟုတ် Macintosh အောက်ရှိ Veritas Backup Exec ဗားရှင်းအားလုံးနှင့်အတူဖန်တီးထားသောဖိုင်များ။
ဒေတာဘေ့စ်၊ အသံအတိုးအကျယ်၊ BKF မော်ကွန်းတိုက်။
ချုံ့ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု BKF မော်ကွန်းတိုက်။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု BKF floppy disk များကဲ့သို့ပျက်စီးနေသောမီဒီယာပေါ်တွင်ဖိုင်များ၊ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
အသုတ်တစ်ခုပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု BKF ဖိုင်များကို။
Multiple Database နှင့် Multi- volume များကိုပြန်လည်ရယူရန်ထောက်ပံ့သည် BKF မော်ကွန်းတိုက်။
ပြုပြင်ရန်ပံ့ပိုးမှု BKF 16777216 TB (ဆိုလိုသည်မှာ 17179869184 GB) ကဲ့သို့ကြီးမားသောဖိုင်များ။
ပြန်လည်စီမံရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအခွင့်ထူးမလိုအပ်ပါ BKF ဖိုင်များကို။
ရှာဖွေရန်နှင့်ရွေးရန်ပံ့ပိုးမှု BKF ဖိုင်တွဲများကိုကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်။
Windows Explorer နှင့်ပေါင်းစည်းခြင်းကိုထောက်ပံ့ပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည် BKF အလွယ်တကူ Windows Explorer ၏ context menu ကိုအတူဖိုင်။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen BKF Repair အကျင့်ပျက်ခြစားမှု Recover ရန် BKF files တွေကို
ဘယ်အချိန်မှာသင့်ရဲ့ BKF ဖိုင်များသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပျက်စီးခြင်း (သို့) ပျက်စီးခြင်းများ၊ သင်မှန်ကန်စွာပြန်မရနိုင်လျှင်သင်အသုံးပြုနိုင်သည် DataNumen BKF Repair စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန် BKF ဖိုင်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှသူတို့ထံမှဒေတာများပြန်လည်ရယူပါ။
မှတ်စု: မည်သည့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးပြန်လည်ထူထောင်မီ BKF ဖိုင်တွဲ DataNumen BKF Repairကျေးဇူးပြု၍ Microsoft Backup Utility နှင့်အခြားအပလီကေးရှင်းများကိုပိတ်ပါ BKF ဖိုင်။
ပျက်စီးနေသော (သို့) ပျက်စီးနေသောကိုရွေးပါ BKF ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရမည့်ဖိုင်
သင်ထည့်နိုင်သည် BKF ဖိုင်အမည်ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။
ပုံမှန်အားဖြင့်, DataNumen BKF Repair အတွက်ပစ္စည်းများ recover လိမ့်မယ် BKF ဖိုင်များကို xxxx အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော xxxx_recovered directory ထဲသို့သိမ်းဆည်းပါ BKF ဖိုင်နာမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ MyBackup ဖိုင်အတွက်။bkf ပုံသေ output output directory သည် MyBackup_recovered ဖြစ်လိမ့်မည်။ အခြားအမည်တစ်ခုကိုအသုံးပြုလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ရွေးပါသို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ပါ။
အကိုကလစ်နှိပ်ပါ ခလုတ်နှင့် DataNumen BKF Repair အလိုလိုtart အရင်းအမြစ်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်း BKF ဖိုင်။ တိုးတက်မှုဘား
အရင်းအမြစ်လျှင်ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးနောက် BKF ဖိုင်ကိုအောင်မြင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ဤကဲ့သို့သောစာတို box ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
ယခုတွင်သင်သည် MyBackup_recovered လမ်းညွှန်ကိုဖွင့်နိုင်သည် BKF ဖိုင်။
DataNumen BKF Repair ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen BKF Repair ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen BKF Repair ၁.၄ ကိုမေလ ၂၃ ရက် ၂၀၀၅ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ချုံ့ပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု BKF ဖိုင်များကို။
DataNumen BKF Repair ၂.၂ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
Windows7နှင့် 8 operating system အသစ်နှင့်လိုက်ဖက်ညီအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။
DataNumen BKF Repair ၂.၀ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen BKF Repair ၁.၆ ကိုAprilပြီ ၁ ရက် ၂၀၁၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
ဖိုင်အမည်များကိုပြုပြင်ခြင်းတွင် bug ကိုပြင်ဆင်ပါ။
DataNumen BKF Repair 1.2 ကိုဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်၊
DataNumen BKF Repair 1.0 ကိုဇွန်လ 16, 2005 တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
အဂတိလိုက်စားမှုရှိသော Microsoft backup ကိုပြန်လည်ရယူရန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခု (BKF) ဖိုင်တွေ။